ARKit iyo yakawedzera chokwadi cheApple inoshamisa muMepu uye kufamba | IPhone nhau
ARKit chokwadi chakawedzerwa cheApple chinoshamisira muMamepu uye kufamba
Sezvo WWDC yekupedzisira munaJune yakaitirwa muguta reSan Jose, Apple nevasimudziri vari kushanda paIOS 11 pane iyo ARKit yakawedzera chokwadi tekinoroji. Iri basa riri kutiratidza mabrugwa anonakidza uye, pamusoro pezvose, paunonyanya kushamisa uri muMamephu application uye mukufambisa pachako.
Mune ino kesi, chatiri kuda kuratidza chidimbu chidiki chebasa iro rinoonekwa online uye rinonyatsoratidza kufambira mberi kweiyi tekinoroji. Vagadziri vacho pachavo uye matsva beta beta eIOS anoenda pamwe uye kufambira mberi kwacho kunoshamisa.
Iyi ndiyo mimwe yemasampuli atinoona pawebhu uye kunyanya mumasocial network senge Twitter:
Apa ndipo patinonanga
Demo reApple kubva gore rapfuura pic.twitter.com/JE7ns93Po8
Tinogona kuona mapoinzi ezvekufarira pamepu zviri nyore achinongedzera mudziyo kana kutoteedzera zvinoratidzwa mune yakachena dhizaini yeSygic browser mepu pakati pezvimwe zvakawanda zvitsva.
Ichi chimwe muenzaniso wevhidhiyo kufamba mune chaicho chakawedzerwa kubva kumugadziri Andrew Hart, ane ARKit uye CoreLocation:
Isu tiri pachena kuti Apple haisiriyo kambani yekutanga kupinda mumunda wezvakawedzerwa chokwadi, asi isu tine chokwadi chekuti vachachinatsiridza kusvika pachinoshamisa zvechokwadi sezvatiri kuona. Ivo vanobva kuCupertino vanogona kunge ndivo vakatora kureba kuti vapinde mundima iyi uye izvi sezvazvinogara zvine chikamu chayo chakanaka uye chikamu chayo chakaipa. Pakupedzisira ndezve kunatsiridza izvo zvatinotova nazvo kana zvatiri kutanga kuva nazvo zvatinokwanisa Uye iyi Apple inoita nemazvo, kana isu tikawedzera basa risinganeti revagadziri vane zvishandiso zvine simba mhedzisiro yacho inogona kunge iri yakanaka chaizvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » ARKit chokwadi chakawedzerwa cheApple chinoshamisira muMamepu uye kufamba
Zvinhu 3, yakanaka asi isina kukwana basa maneja
Apple Watch LTE haizoiti mafoni